Waxaan sameynay xaflad dhalasho dhalasho xilliga qaboobaha, si aan u wada dabaaldegno una qabanno BBQ bannaanka.Gabadha dhalashadu waxay sidoo kale ka heshay baqshad cas cas shirkadda.
Shirka isboortiga Shawei Digital Summer
Si loo xoojiyo awoodda wada shaqeynta, shirkaddu waxay abaabushay oo ay qabanqaabisay kulanka isboortiga xagaaga Muddadan, waxqabadyo isboorti oo kala duwan ayaa loo habeeyay inay la tartamaan Chile ujeeddadeeduna tahay xoojinta isuduwidda, isgaarsiinta, iskaashiga labada dhinac iyo jimicsiga jirka ...
Si si wanaagsan loogu adeego macaamiisha, loo fahmo dalabkooda, SHAWEI DIGITAL had iyo jeer waxay qabtaan tababar xirfadeed kooxda iibka, gaar ahaan Calaamadee shayada cusub iyo tababarka mashiinka daabacaadda. Marka laga reebo fasallada qadka tooska ah ee ka socda HP Indigo, Avery Dennison iyo Domino, SW LABEL ayaa sidoo kale abaabula inay booqdaan printin ...
Bannaanka BBQ Party
Shawei digital Abaabul waxqabadyada bannaanka si joogto ah si loogu abaalmariyo kooxda hadaf yar oo cusub.Tani waa koox dhalinyaro ah oo firfircoon, dadka dhalinyarada ah had iyo jeer waxay jecel yihiin xoogaa shaqo abuur ah iyo waxqabadyo.
SAXIIX CHINA —MOYU waxay hogaamisaa warbaahinta qaab weyn
Shawei Digital wuxuu kaqeybgalay SIGN CHINA sanadkasta, badanaa wuxuu muujiyaa "MOYU", oo ah sumad hormuud u ah suuqa loogu talagalay xirfadleyda daabacaadda qaabka weyn ee warbaahinta.
SW Label waxay dejisay laba maalmood bannaanka oo ay ku kordhinayso oo ay maamushay dhammaan kooxda Hangzhou, si ay ugu tababarto geesinimadeena iyo wada shaqeynta kooxda. Intii tababarku socday, dhammaan xubnuhu si dhow ayey u wada shaqeeyeen. Taasina waa dhaqanka shirkadda - Waxaan nahay qoys weyn oo ka tirsan Shawei Team!
LABEL Expo Exhibition DIGITAL LABEL
SW LABEL waxay kaqeyb gashay bandhiga LABEL EXPO, inta badan waxay muujineysaa DHAMMAAN taxanaha sumadaha dhijitaalka ah, laga bilaabo Memjet, Laser, HP Indigo ilaa UV Inkjet. Waxyaalaha midabada leh ayaa soo jiitay macaamiil badan si ay u soo baaraan.
APPP EXPO oo ku taal Shanghai oo loogu talagalay PVC daabacaadda ballaadhan ee 5M Bilaash ah
SW Digital waxay kaqeybgashay barnaamijka APPP EXPO ee kuyaala magaalada Shanghai, inta badan si loo muujiyo qaabka daabacaadda qaabka weyn, cabirka ugu weyni waa 5M. Iyo bandhigga bandhigga sidoo kale kor loogu qaado waxyaabaha cusub ee warbaahinta "PVC BILAASH".
Safarka Bannaanka Shawei ee Dibedda ee Great Angie Forest
Xagaagii kululaa, shirkadu waxay abaabushay dhamaan xubnihii kooxda inay safar safar ah ku aadaan Anji si ay uga qeybqaataan dalxiiska banaanka. Jardiinooyin biyo ah, goobo dalxiis, hilib dubis, buur fuulid iyo jiingado ayaa la abaabulay. Intii aan ku dhowaanay dabeecadda oo aan nafteena madadaalinayno, waxaan sidoo kale ...
DIY Heat Wareejinta Isku-dhejiska Vinyl
Tilmaamaha Wax Soo Saarka: 1) vinyl koollo ah oo goynta nabarrada dhalaalaya iyo kuwa jilicsan labadaba. 2) Xakamee cadaadiska xasaasiga ah ee xabagta joogtada ah. 3) Warqad PE-dahaarka Silicon Wood-Pulp Paper. 4) Filimka jadwalka taariikhda loo yaqaan 'PVC calendared'. 5) Ilaa 1 sano adkeysi. 6) Cadaadis xoog leh iyo iska caabin cimilada. 7) 35 + midab oo lagu xusho 8) Transluce ...
HUAWEI - Tababbarka kartida iibka
Si kor loogu qaado awooda iibiyeyaasha, shirkadeenu waxay dhawaan kaqeyb gashay koorsada tababarka ee HUAWEI. Fikradda iibka ee horumarsan, maaraynta kooxda sayniska annaga iyo kooxo kale oo heer sare ah si aan u baranno khibrad badan. Tababarkan, kooxdeena ayaa noqon doonta mid aad u fiican, waxaan u adeegi doonnaa e ...
Banner Dibedda PVC Dibedda
Dharka lagu buufiyo ayaa ku kala duwan waxqabadka iyo isticmaalka. Waxaa lagu kala saari karaa dhumucda, fudaydka iyo qalabka, iwm. Hordhaca Alaabada Marada madow iyo tan cad waxaa sidoo kale loo yaqaan maro madow sanduuqa iftiinka gadaashiisa ama maro madow.Waxay kululeyneysaa labada lakab ee kore iyo hoose ee filimka PVC-ga ah